Nepal Lalana Fitateram-Suzhou Sohologistics CO., LTD.
Home>Our Services>Ny fitaterana làlana iraisam-pirenena>Fitaterana làlana any Nepal
Fitaterana arabe iraisam-pirenena Asean
Namaly tamim-pahombiazana ny "fampandrosoana tandrefana" an'ny komity foibe CPC, "One Belt And One Road" fandraisana andraikitra, ny SHL dia nanitsy ny fomba fandrafetana paikady amin'ny orinasa ary manomboka manome serivisy serivisy fitaterana làlana iraisam-pirenena mankany Nepal.
Nentina tany Kathmandu, renivohitr'i Nepal, hatrany amin'ny faritanin'i Nepal rehetra, tamin'ny seranan'i Jilong sy ny seranan'i Zhangmu any Tibet, manerana an'i Shina.
Ny tombony azo avy amin'ny soholojia
1. Fitaterana an-dalambe navelan'ny minisitry ny fitaterana ary fahazoan-dàlana ho an'ny fitaterana entana mavesatra sy be loatra
2. traikefa eo amin'ny asa fanamboarana tetik'asa ary serivisy serivisy iraisam-pirenena momba ny fitaterana làlana
3. Ny saram-pitaterana entana azo noho ny lozika fitaterana mahay
4. Rafitra fanaraha-maso ny fitaterana GPS ho an'ireo cargos
5. Araraoty ny fiara-miasa amin'ny fitaterana làlana iraisam-pirenena avy any Chine ka mankany Eropa
6. Mpisava lalana ho an'i Shina - fitaterana làlana iraisam-pirenena any Eropa
7. Serivisy entana feno entana (FTL) feno entana
8. Ny serivisy ho an'ny mpitatitra entana tsy latsaky ny kamiao (LTL)
Misy seranan-tsambo zhangmu sy seranan'i jilong miaraka amin'ny haavo avo？
Mihoatra ny 4000 metatra ny haavon-kavoana ao Tibet. Ny mpamily sy ny fiara avy any Mainland dia tsy mety miditra amin'ny seranana mivantana. Raha jerena amin'ity lafiny ity dia nametraka trano fitehirizam-bokatra lozisialy any Xining ao amin'ny faritanin'i Qinghai, Lanzhou ao amin'ny faritanin'i Gansu ary Lhasa any Tibet ny Sohologistana mifanakalo fiara amin'ny toerana mety kokoa ary mandamina ireo mpamily nisolo toerana miaraka amin'ny matihanina amin'ny fanamoriana plateau.
Azo atao ve ny mitondra fanoratana varavarana any Nepal?
Ny sohologist dia manome fitaterana làlan-jotra iraisam-pirenena iray mankany amin'ny fandraharahana any Nepal manerana an'i Shina amin'ny alàlan'ny seranan'i Jilong na seranan'i Zhangmu ho an'ny fiara fitateram-bahoaka sy ny fanodinana amin'ny fihoaram-pefy, ny fanovana ny fametrahana ny fanaraha-maso, ny fanaraha-maso ny fangalarana, ny fanesorana ny fanao.
Inona no karazan'entana mifanentana amin'ny fifamoivoizana iraisam-pirenena mankany Nepal?
Amin'izao fotoana izao (2019), afa-tsy ny fitaterana Air, dia misy fantsona roa fotsiny avy any Chine mankany Nepal, izay fitaovam-pitaterana antrano miaraka amin'ny fandefasana ranomasina sy kamiao (izany dia amin'ny fandefasana ny seranan'i Calcutta avy eo amin'ny kamio mankany amin'ny gara any Nepal) sy ny fitaterana làlana iraisam-pirenena. Fitaovana herinaratra herinaratra herinaratra, milina injeniera, crane, kamiao forklift, fitaovana fanamboarana sakafo, sakafo, asa-tanana, sakafo isan'andro sy ny sisa dia mety amin'ny fitaovam-pitaterana làlana iraisam-pirenena mankany Nepal araka ny voalazan'ny traikefa Sohologistics.
Ahoana ny fomba hanatanterahana ny fanambarana momba ny fadin-tseranana, ny famindrana ny fomba amam-panao ary ny fahazoan-dàlana amin'ny fomba fitaterana làlana iraisam-pirenena mankany Nepal?
Ho an'ny fitaterana làlana mankany Nepal dia matetika ny manatanteraka ny fanambarana ao amin'ny seranan-tsambo ny fanondranana ary manao fanadiovana eo amin'ny seranan-tsambo na amin'ny POD any Nepal.
Iza no mampiasa ny fitaterana làlana iraisam-pirenena mankany Nepal?
Misy doka roa DDU (Digned Duty Unpaid antsoina hoe toerana haleha), izany hoe ny fanomezana Duty Unpaid any amin'ilay toerana voafaritra sy ny DAP - Natolotra amin'ny toerana alehan'ny fandefasana.
Ahoana ny momba ny volavolan-dalàna famoahana fiara fitateram-bahoaka any Nepal?
Fitaovana CMR navoakan'ny sendika iraisampirenena iraisam-pirenena, izay eken'ny firenena ASEAN any Azia afovoany sy ireo firenena CIS hafa. Ao anatin'izany ny fampahalalana momba ny cargos, ny shipper, consignee, carrier izay mitovy amin'ny volavolan-dalàna fakana entana.